Iindaba - Le mimoya iphantsi kwe-radar iya kunyusa uluhlu lwe-UPS
I-Motley Fool yasekwa ngo-1993 ngabazalwana uTom no David Gardner. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, iipodcast, iincwadi, iikholamu zamaphephandaba, iinkqubo zikanomathotholo kunye neenkonzo zotyalo-mali oluphambili, sinceda izigidi zabantu ukuba zifumane inkululeko yezemali.
Inkonzo ye-United Parcel Service (i-NYSE: i-UPS) yayinenye ikota ebalaseleyo, kunye neenzuzo zayo zamazwe aphesheya ezibetha irekhodi eliphezulu, ngengeniso enamanani aphindwe kabini kunye nokukhula kwemivuzo. Nangona kunjalo, ngenxa yenkxalabo malunga nokwehla kwengeniso yase-US kunye nokulindelwe kwemida esezantsi kwikota yesine, isitokhwe sisehla nge-8.8% ngoLwesithathu.
Ifowuni yengeniso ye-UPS igcwele ziziphumo ezinomdla kunye noqikelelo lokukhula kwengeniso kwixa elizayo. Makhe sijonge umxholo osemva kwala manani ukumisela ukuba iWall Street ithengise i-UPS ngempazamo kwaye yintoni eya kuqhuba ixabiso lesitokhwe kwixesha elizayo.
Ngokufana nekota yesibini, i-e-commerce kunye neshishini elincinci neliphakathi (i-SMB) inyuswe indawo yokuhlala, kukhokelela kwirekhodi ye-UPS yerekhodi. Xa kuthelekiswa nekota yesithathu ka-2019, ingeniso inyuke nge-15.9%, inzuzo yokusebenza ehlengahlengisiweyo inyuke nge-9.9%, kunye nemivuzo ehlengahlengisiweyo yesabelo ngasinye inyuke nge-10.1%. I-UPS yeveki yokuhambisa umhlaba ivolumu inyuke nge-161%.
Kuwo wonke lo bhubhani, iindaba eziphambili ze-UPS yayikukuhamba kwiindawo zokuhlala njengoko abantu babethintela ukuthenga emntwini kwaye babuyela kubathengisi be-Intanethi. I-UPS ngoku iqikelela ukuba ukuthengisa nge-e-commerce kuya kubalelwa ngaphezulu kwe-20% yentengiso yaseMelika kulo nyaka. Umphathi we-UPS uCarol Tome uthe: “Kwanasemva kobhubhane, asicingi ukuba izinga lokungena kweentengiso ze-e-commerce liyakwehla, kodwa ayizukuthengisa nje kuphela. Abathengi kuyo yonke imimandla yeshishini lethu bayayitshintsha indlela abaqhuba ngayo ishishini. ” . Umbono kaTome wokuba i-e-commerce trends ziya kuqhubeka ziindaba ezinkulu kwinkampani. Oku kubonisa ukuba abaphathi bakholelwa ukuba izenzo ezithile zobhubhane azingomqobo nje wexeshana kwishishini.
Enye yezona zinto zinobuqili ekufumaneni i-UPS kwikota yesithathu yomvuzo kukunyuka kwenani lee-SMB. Kwindlela ekhawulezayo yenkampani, intengiso ye-SMB inyuke nge-25.7%, encedisile ekunciphiseni ukwehla konikezelo lwentengiso ziinkampani ezinkulu. Ngokubanzi, umthamo we-SMB unyuke nge-18.7%, elona zinga liphezulu lokukhula kwiminyaka eyi-16.
Ulawulo lubonisa inxenye enkulu yokukhula kwe-SMB kwiNkqubo yokuFikelela kwiDijithali (DAP). I-DAP ivumela iinkampani ezincinci ukuba zenze iiakhawunti ze-UPS kwaye zabelane ngezibonelelo ezininzi ezonwatyelwa ngabathumeli abakhulu. I-UPS yongeze ii-akhawunti ezingama-150,000 ze-DAP kwikota yesithathu kunye neeakhawunti ezintsha ezili-120,000 kwikota yesibini.
Ukuza kuthi ga ngoku, ngexesha lobhubhane, i-UPS ibonakalisile ukuba ukuthengisa okuphezulu kwendawo yokuhlala kunye nokuthatha inxaxheba kwamashishini amancinci naphakathi kunokukunciphisa ukwehla kwevolumu yorhwebo.
Olunye ulwazi olufihlakeleyo lwenkomfa yomnxeba yenkampani kukubeka indawo kwishishini lokhathalelo lwempilo. Ukhathalelo lwempilo kunye nemizi-mveliso yezithuthi yayiyekuphela kwamacandelo eshishini ukuya kwishishini (B2B) kule kota-nangona ukukhula bekungonelanga ekunciphiseni ukwehla kwecandelo lezemizi-mveliso.
Isigebenga sezothutho ngokuthe ngcembe siyiphucule inkonzo ebalulekileyo yezothutho yezonyango i-UPS yeNkulumbuso. Imigca yemveliso ebanzi yeNkulumbuso ye-UPS kunye noKhathalelo lwezeMpilo lwe-UPS zigubungela onke amacandelo entengiso e-UPS.
Ukuthembela kwiimfuno zeshishini lokhathalelo lwempilo lukhetho lwendalo lwe-UPS, kuba i-UPS ikwandisile iinkonzo zomhlaba kunye nezomoya ukulungiselela indawo yokuhlala ephezulu kunye nokuhanjiswa kweSMB. Inkampani ikwenze kwacaca ukuba ikulungele ukuphatha imiba yokuhanjiswa kokugonya kwe-COVID-19. Umphathi omkhulu u-Tome wenze la magqabaza alandelayo kwi-UPS yezeMpilo kunye nobhubhane:
[Iqela lezonyango lixhasa uvavanyo lwezonyango lweyeza lokugonya le-COVID-19 kuwo onke amabakala. Ukuthatha inxaxheba kwangoko kusinike idatha enexabiso kunye nokuqonda kuyilo lwezicwangciso zokuhambisa urhwebo kunye nokulawula ukulungiswa kwezi mveliso zinzima. Xa isitofu sokugonya se-COVID-19 siphumile, saba nethuba elihle kwaye, ngokunyanisekileyo, saba noxanduva olukhulu lokusebenzela umhlaba. Ngelo xesha, uthungelwano lwethu lwehlabathi, izisombululo zekhonkco ezibandayo kunye nabasebenzi bethu baya kuba belungile.
Njengakwiminye imisila enxulumene nobhubhane, kulula ukubeka impumelelo yeUPS kutshanje kwizinto zethutyana ezinokuthi ziphele ngokuthe ngcembe njengoko ubhubhane uphela. Nangona kunjalo, abaphathi be-UPS bakholelwa ekubeni ukwandisa uthungelwano lwezothutho kunokuzisa izibonelelo zexesha elide, ngakumbi ukwanda okuqhubekayo kwe-e-commerce, ukudityaniswa kwe-SMB kubathengi bayo kunye neshishini lezonyango elisebenza ngexesha, eliya kuqhubeka Ukudibana neemfuno ishishini lezonyango kule minyaka imbalwa izayo.
Kwangelo xesha, kufanelekile ukuphinda-phinda ukuba iziphumo zekota yesithathu ze-UPS zazinomdla xa ezinye iivenkile zorhwebo zazisengxakini. I-UPS kutsha nje inyukele kwi-52 yeeveki eziphezulu, kodwa sele iwile kunye nezinye iimarike. Ukujonga ukuthengiswa kwesitokhwe, ukubakho kwexesha elide kunye nesivuno se-2.6%, i-UPS ngoku ibonakala ngathi lukhetho olufanelekileyo.